रोचक « Onlinetvnepal.com
(१) मिथुन राशि – यस राशिका व्यक्ति एकदमै छिटो प्रेममा पर्ने गर्छन् । कसैको कुनै पनि कुरा राम्रो लागेमा आकर्षित भइहाल्ने र भविष्यबारे सपना देख्न थाल्छन् । यद्यपी, जति चाँडो प्रेममा पर्छन्, त्यति नै छिटो प्रेमको भूत पनि उत्रिहाल्छ । ﻿ (२) कर्कट राशि – प्रेममा विश्वाससिलो, सम्बन्धप्रति इमान्दार र
वैवाहिक जीवनमा महिलाले सुधार्नु पर्ने स्वभावहरु यस्ता छन् !
वैवाहिक जीवनमा राम्रो स्वभाव भएका स्त्री भयो भने पतिको जीवन एकदम स्वर्ग जस्तो हुन्छ ।साथै पत्नीसँगै पतिको पनि स्वभाव राम्रो भयो भने स्त्रीको जीवन एकदमै राम्रो हुन्छ । तर कतिपय महिलाहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ,कि जसले एक अर्काको सम्बन्धमा विभिन्न वाधा अर्चन आउन थाल्दछ ।त्यसैले स्त्रीहरूको केही स्वभाव बारेमा उल्लेख गरिएको
जान्नुहोस : बिहानै यस्तो सपना देख्नु भयो भने सुखै-सुख मिल्ने !
सपना हामी सबैले देख्ने गर्दछौ । हरेक सपनाको आफ्नै-आफ्नै महत्व र अर्थ रहेको हुन्छ । यस्तै ज्योतिष शास्त्र अनुसार बिहान-बिहान देखिएको सपना सत्य साबित हुने गर्दछ । यदि तपाइले पनि बिहान सपनामा यस्ता चिजहरु देख्नुहुन्छ भने तपाइको लागी निकै नै शुभ साबित हुनसक्छ । – यदि कसैलाई सपनामा कमिला यता
राती सुत्दा अ‍ैठन भएर हैरान हुनुहुन्छ ? नराम्रो सपना देखेमा यी पाँच काम गर्न कहिल्यै नछुटाउनुहोस्
के तपाईलाई राती सुत्दा नराम्रो सपना अथवा अ‍ैठन हुने गर्छ ? कसैलाई त दैनिक त्यस्तै समस्याले सताउने गर्छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि शास्त्र अनुसार यसो गर्नुहोस्। १. सुकमेलः यदि रातको समयमा तपाईलाई डरलाग्दो सपनाले सताईरहेको छ भने ५ वटा जति सुकमेल कपडामा बेरेर आफ्नो सिरानीको नजिक राख्नु पर्छ
यी ९ वटा मन्त्र जसले मानिसको जीवन नै परिवर्तन हुने विश्वास गरिन्छ !
आफ्नो ग्रह दोषले गर्दा मानिसहरुले अनेकौ समस्याहरु झेलिरहेको हुन्छन्। यस्ता उपायहरु छन् जसको सही ढंगबाट सदुपयोग गरियो भने ग्रहलाई अनुकुल बनाएर लाभान्वित पनि बनाउन सकिन्छ। ﻿ यी नवग्रहको मन्त्र जप गर्नुहोस :- १) सूर्य मन्त्र ॐ ह्रीं ह्रों सूर्याय नम २)चन्द्रमा मन्त्र ॐ ऐं क्लीं सोमाय नम ३)मंगल मन्त्र ॐ
गाईले पत्ता लगाएको महादेव ! दर्शन गर्नेको भिड
ब्याउन लागेको गाई गोठबाटै हरायो । अहिलेको गुप्तेश्वर महादेवपारिपट्टि खेतमा गाईगोठ थियो । गाई खोज्दाखोज्दै महिनौं बित्यो । फेलापरेन । गाईधनीले गाई माया मारिसकेका थिए । मनमा तोड परे पनि गाई माया मार्नुको विकल्प थिएन । सपना सपना नै हो, विपना हुन सक्दैन भनिन्छ । यससम्बन्धमा गाईधनीसमेत जानकार थिए ।
मानिसको जीवन सुख र दुःखको संगम हो । जीवनमा सुख र दुःख आउँछ अनि जान्छ पनि तर केही यस्ता कुराहरु छन् जुन कुरा भएका मानिसलाई शास्त्रले सुखी व्यक्तिको रुपमा वर्णन गरेको छ । जो व्यक्तिसँग धन, निरोगी शरीर, सुन्दर पत्नी, मीठो वाणी, आज्ञाकारी पुत्र र धनप्राप्त गर्ने विद्या छन् ती
घरमा राख्दै नराख्नुस यि ६ चिज गरिबी देखी ज्यानै जान सक्छ !
मानव जिवनमा अति अावस्यकीय चिज मध्ये घर प्रमुख हाे । इच्छा र सपना अनुसार अाफु बस्ने घर के कस्ताे बनाउने हाे त्याे कल्पना गरी या चित्रण गरी बनाइन्छ । घर बनाइसकेपछि बिभिन्न सजावटहरू सुरू गरिन्छ तर कतिपय सजावटकै सामानले घरमा असन्तुलनीय बाताबरण शिर्जना हुन्छ । ﻿ अाउनुस बास्तु शास्त्र अनुसार
घरको सुख शान्तिका लागि पतिपत्नीले हरेक बिहान गर्नुहोस् यी ४ काम !
पति पत्नीबीचको प्रेममा कमी भयो भने तथा केही कुरामा सम्झदारी भएन भने घरमा कलह बढ्दै जान्छ। कहिले काही नचाहादा नचाहदै सानो सानो कुरामा पति पत्नीबीच झगडा हुने गर्दछ। सानो सानो कुरामा मन मुटाब हसँदा सम्बन्धमा दरार पनि आउन सक्छ। त्यसैले घरको सुख, शान्ति तथा सम्मृद्धिका लागि पतिपत्नीबीच प्रेम तथा सदभाव
हरेक दिन रहने हरेक बार कुनै न कुनै ग्रहसंग जोडिएको हुन्छ। हरेक बार असर रहने ग्रहको असर सामान्य बनाउनको लागि विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। सप्ताहको सातै दिन ग्रहको शुभ असर प्राप्त गर्नको लागि ज्योतिष शास्त्रमा केहि उपायहरु उल्लेख गरिएका हुन्छन्। कुन बार कुन ग्रहको असर हुन्छ भन्ने समेत ज्योतिष शास्त्रमा